Tuesday April 18, 2017 - 14:23:36 in Wararka Gudaha by Nocsom Editor
Kulankan oo ay kasoo qeyb galeen masuuliyiin ka socotay guddiga Fullinta GOS , Madxada xiriirada iyo qabiiro aqoon durugsan u leh arimaha diyaarinta qorsheynta ayaa ugu horeyn lagu soo banadhigay qorshahii GOS ee 2011 kaasoo waqtigiisu ku ekaa 2016, waxeyna xubanaha ka doodeen waxyaabihii ka qabsoomay qorshaas iyo hiigsiga qorsha cusub.
Waxeyna dood iyo falanqeyn dheer kadib ay xubnaha isla garteen in la isticmaalo qeyb ka mid ah qorshahihi hore ,qorsho cusubna lagu daro iyadoo la waafajinayo qorshaha Guddiga Olombikada adduunka (IOC).
Qorshahan waxaa ka mid ah Horumarinta Aqoonta Maamulka, Macalamiinta, Garsoorka AKademiyada da’yarta qeybaha kale gedisan ee Isboortiga, diyaarinta xulal qaran oo tayadoodu sareyso oo guulo wax ku gool ah ka sameeya ciyaaraha Caalamiga iyo helista garoomo daboolo baahiyaha jira.
Gebagabdii waxaa halkaas ka ka hadlay Guddoomiyaha Guddiga Olombika Soomaaliyeed Mudane Cabdullaahi Axmed Tarabi , waxuuna sheegay in aad u qancay sida hufnaanta leh oo ay xubnaha uga doodeen qorshaha isla markaana uu aad ugu rajo weyn yahay in qorshahan uu wax weyn ka badali doono horumarka Isboortiga dalka.
Guddoomiye Tarabi ayaa dhanka kale tilmaamay in ay muhiim tahay in la helo qorshe siwada jir ah looga shaqeeeyay diyaarintiisa, basle ay lagama maarmaan tahay in sida wadajir ah laysaga kaashado dhaqan gelintiisa si loogaaro heeka horumarineed la wada hiigsanayo.